I-malware entsha echaphazela ii-Macs ibizwa ngokuba ngu-Eleanor | IPhone iindaba
Oko bekusoloko kusithiwa iiMacs zikhuselekile, kwaye azidingi nasiphi na isicelo ukunqanda iintsholongwane, ukuba ukuba zikhuselekile ngakumbi ... akukho nto iqhubeka kwinyani. I-Windows ibisoloko iyeyona nkqubo ifakiweyo kwaye isetyenzisiweyo kwihlabathi ngelixa i-OS X yayingasetyenziswa liqaqobana, kungoko abahlaseli bahlala bejolise kwimizamo yabo yokubeka phambili uhlaselo lwabo kwiWindows hayi kwi-OS X.
Kodwa okwethutyana ngoku, kubonakala ngathi iiMacs zijolise kubahlobo bomnye umntu, kwaye rhoqo kwiinyanga ezimbalwa I-malware entsha, intsholongwane okanye iTrojan iyavela ehlasela iiMacs. Kucacile ukuba baninzi abasebenzisi abasebenzisa ezi khompyuter kunye nabagculeli bafuna ukwandisa icandelo labo lesenzo ngokuhlasela aba basebenzisi.
IBitdefender ifumene i-malware entsha echaphazela uninzi lwee-Macs ngenkqubo yokusebenza ye-OS X, kwaye iye yabhaptizwa ngegama elithi Backdoor.MAC.Elanor. Ekuphela kwendlela yokufikelela kwiikhompyuter zethu yile ngokusebenzisa izicelo ezingakhange zidlule kwiifilitha zeVenkile ye-Mac AppOko kukuthi, akuqinisekiswanga yinkampani.
Isicelo esinyamekelayo usasaze le malware yi-EasyDoc ConverterIsicelo esikwithiyori esivumela ukuba siguqule iifayile kwiifomathi ezahlukeneyo, uguquko olungazange lwenziwe, kodwa wakube uyifakile, sele usulelekile. Esi sicelo, njengabanye abaninzi abathembisa izinto ezininzi ukuba zingenzi nto, iyafumaneka ukuze ikhutshelwe kwiipotali ezahlukeneyo, ezibangele ukwanda ngokukhawuleza kunye nokusasazeka kwizigidi ezininzi zeMacs.
Le malware ibonelela ngolawulo olupheleleyo lwenkqubo, ukuze ikwazi ukuthintela ukufikelela, tGuqula iMac yethu ibe yibhotnet ukwenza uhlaselo lwe-DDoS kwaye wenze uthungelwano lweekhompyuter ze-zombie ezinokulawulwa ngokwendlela abagcini abafuna ukuyinika yona.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Izaziso » I-malware entsha echaphazela ii-Macs ibizwa ngokuba yi-Eleanor
I-malware echaphazela zonke izixhobo ze-ios iyakhothwa: ios 7,8,9 kunye ne-10 yokugqibela yenye yezona ziyingozi!